ကွန်ပျူတာဆက်စပ်ပစ္စည်းများတွင် Warranty ပါရှိသော်လည်း အမှန်တကယ်လဲမပေးမှုများနှင့် ကြုံနေရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » ကွန်ပျူတာဆက်စပ်ပစ္စည်းများတွင် Warranty ပါရှိသော်လည်း အမှန်တကယ်လဲမပေးမှုများနှင့် ကြုံနေရ
ကွန်ပျူတာဆက်စပ်ပစ္စည်းများတွင် Warranty ပါရှိသော်လည်း အမှန်တကယ်လဲမပေးမှုများနှင့် ကြုံနေရ
Posted by kln on May 3, 2010 in Other - Non Channelized |4comments
ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းဝယ်ယူသူ Customer များအနေဖြင့် Warranty ရှိပစ္စည်းများ ချွတ်ယွင်းပျက်စီးမှု ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အခါဝယ်ယူခဲ့သောဆိုင်သို့သွားရောက်ပြုပြင် လဲလှယ်ရာ၌ အဆင်မပြေမှုများနှင့် ကြုံတွေ့နေရကြောင်း သိရသည်။ “ကျွန်တော့် မန်မိုရီစတစ်ဆိုရင် Warranty ရှိပြီး Brand လည်းကောင်းတော့ စိတ်ချလက်ချပဲဝယ်ယူခဲ့တာ။ အိမ်ရောက်တော့သုံးမယ်ဆိုပြီး USB ပေါက်ထဲထိုးကြည့်တော့ စတစ်က Detect တောင်မှရဘူး။ ဝယ်ယူခဲ့တဲ့ဆိုင်မှာသွားပြန်ပြပြီးလဲတော့ အီးမလုပ်အဲမလုပ်နဲ့တစ်လတောင်စောင့်လိုက်ရတယ်။ Warranty မရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်တာကပဲ စိတ်ချမ်းသာရဦးမယ်” ဟု ကွန်ပျူတာ ဟတ်ဝဲလ်သင်တန်းတက်ရောက်နေသူ ကိုစွာစိကပြောသည်။ အမှန်တကယ်အားဖြင့် ကွန်ပျူတာအရောင်းဆိုင်တချို့တွင် ကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည် Warranty ပေးထားသည်ဆိုသော်လည်း ပင်ရင်းဆိုင်မှ တစ်ဆင့်ပြန်လည်ဝယ်ယူ ရောင်းချရခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် ပစ္စည်းပြုပြင်လဲလှယ် ဝန်ဆောင်မှု ပေးရာတွင် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများ ရှိနေပြီး ပစ္စည်းပြန်လဲမပေးမှု များပင်ရှိနေကြောင်းသိရသည်။ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းရှိ ကွန်ပျူတာအရောင်းနှင့် ဆားဗစ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှ မဖြူဖြူခိုင်ကလည်း “လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပုံနဲ့ တချို့အနေအထားတွေက Customer တွေစိတ်ပျက်မယ်ဆိုရင်လဲ သူတို့ကို အပြစ်ပြောလို့မရဘူး။ ဆားဗစ်ပေးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေ အနေနဲ့လဲလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာထိတော့ လုပ်ပေးပါတယ်။ တချို့အပိုင်းတွေကျတော့ ရောင်းပြီး ပြီးရောဆိုသလိုမျိုး ဖြစ်နေတော့ Customer တွေရဲ့မကျေနပ်သံကို အမြဲလိုလိုကြားရတဲ့အခါ ဦးနှောက်ခြောက်ရတယ်” ဟုပြောသည်။ ယင်းပြင် အိုင်စီတီ အရောင်းပြပွဲ တစ်ခု၌လည်း Acer အမျိုးအစား ၁၂သိန်းတန်လက်တော့ပ် ဝယ်ယူခဲ့သော Customer တစ်ဦးသည် Laptop Bag တွင် Acer အမှတ်တံဆိပ် မပါ၍ဆိုက ယင်းလက်တော့ပ်အားအဆိုပါကွန်ပျူတာအရောင်းဆိုင်သို့ ချက်ချင်းပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ဘယ်ပစ္စည်းဘဲ ၀ယ်ဝယ် သူနဲ.ဆိုင် တဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေပေးရမည် ကိစ္စကို မပေးဘဲ ရောင်းချခြင်းသည် နိုင်ငံကြီသား စိတ်ဓါတ်မဟုတ်ဘူး။လူလည်ကျတာတော့မကောင်းဘူးပေါ့။
ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေမှာ တံဆိပ် မပါတာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ သက်ဆိုင်ရာတံဆိပ်တော့ ပါပြီး Original မဟုတ်တာတွေလည်း ရှိနေတယ်ခင်ဗျ
အဓိကရေးချင်တဲ့အကြောင်းက ……………… တန်ရာတန်ကြေး ယူပြီးရင် သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ Services ပြန်ပေးရမယ် …………နိုင်ငံကြီးသားပီသနိုင်ကြပါစေ………။
ရောင်းရရင်ပြီးရော ဆိုပြီး ထိုးရောင်းတဲ့ပြဿနာကြောင့်ဖြစ်ရတာ
သူတို့ အမြတ်မစွန်းရဖို့ ဦးစားပေးလွန်းတော့
နယ်ကသူငယ်ချင်း က သူ့သမီးအတွက် လက်တော့ တစ်လုံးဝယ်ခိုင်းလို့…….. ခဏ စောင့်ပါအုံး
အခု မတ်လ ထဲမှာ တပ်မတော်ပြခန်း ပြပွဲ ကြမှဝယ်ကြမယ်….ပေါ့ အဲဒီပြပွဲမှာ …. နောက်ဆုံးပေါ်
အသစ်တွေ ၀ယ်လို့ရမယ် နံမည်ကြီး ဆိုင်တွေ ရောင်းကြ ပြကြမှာ ဆိုပြီးစောင်ခိုင်းလိုက်တယ်။
ပြပွဲရောက်တော့ သူငယ်ချင်းလဲ ရောက်လာပြီး မင်းစိတ်ကြိုက်ဝယ်ပေးပါ……..သူငယ်ချင်း ၀ယ်ပေးတဲ့
စက်ပေါင်းကလဲ မနဲဘူး မင်းဝယ်ပေးရင်စိတ်ချရတယ်ပေါ့……. သူငယ်ချင်း ၂ ယောက်ပြပွဲ မှာမွှေတော့တာဘဲ
ကိုယ်က လေးစားလို့ ဆိုင်နံမည်မရေးပါဘူး….လိုချင်တာက Acer ဆိုင်ကကလေးမလေးက MSI ကပိုကောင်း
တယ် ဈေးနဲနဲဘဲ ပိုတယ် Warranty ကလဲပိုကောင်းတယ်ပြောလို့ ၀ယ်လိုက်ပါတယ် စမ်းပြီးဝယ်တာပါ…
အိမ်ရောက်လို့ ဖွင့်တော့ setup——— DEL ဆိုပြီးဆက်မတက်တော့ဘူး DEL နှိပ်လဲမရတာနဲ့ ဆိုင်ကိုဖုန်းဆက်ပြောတော့ ထုံးစံအတိုင်း ယူလာခဲ့ပါတဲ့၊ ရောက်တာနဲ့ ဘောင်ချာပေး၊ စက်က ပါကင်စီးတွေစစ်၊ ဖြစ်တာပြော၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပတ်ပေး၊ အဲဒီမှာ ဘောင်ချာဖြတ်ပြီး နောက် ၅ ရက်နေရင် အကြောင်းပြန်မယ်လို့ပြောပြီးပြန်လွှတ်တယ်………………
ဘယ်ရမလဲ နောကြေနေဘီ၊ အသစ်လိုချင်လို့ အကောင်းစားကိုမှ ဈေးကြီးပေးပြီး ပြပွဲကိုစောင့်ပြီးဝယ်တာ
အခေါ်အပြောကမညက်တော့ မပြောချင်တဲ့စကားပြောလိုက်ရတယ်. အဲဒီအမျိုးသမီးက ဘာပြောလဲဆိုတော့ လူကို အစိမ်းလိုက်စားတော့မယ် မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီး . ဒီစက်က ဒီဆိုင်မဟုတ်ဘူး သူများဆိုင်က တင်ရောင်း ခိုင်းလို့ ရောင်းရတာတဲ့ သူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ လိပ်စာပေးလိုက်မယ်လို့ဆိုတယ် ……. ရရိုးလား
ဘောင်ချာမှာရေးထားတာကလဲ ဒီဆိုင် ပိုက်ဆံချေတာလဲ ဒီဆိုင်ဘဲ၊ ကိုယ့်ပစ်စီး မဟုတ်ဘူးလို့ စရောင်းထဲက ပြောပါလား….. စက်ကို Motherboard ပြန်လဲရမယ် နဲနဲကြာမယ်စောင့်ပေးပါ လို့ နဲနဲလေသံပျော့ပြီးပြောလာ တယ်၊ မရဘူးလေ အသစ်လိုချင်လို့ အကောင်းစားကိုမှ ဈေးကြီးပေးပြီး ပြပွဲကိုစောင့်ပြီးဝယ်တာ။ အားကိုးလို့
၀ယ်ခိုင်းသူကို ဘယ်ဘိုမျက်နှာပြရမလဲ ကိုယ်ချင်းစာကြည့်ကြပါ တစ်လတောင် ထပ်စောင့်ခိုင်းတော့……… ဟဲ ဟဲ.. ခုချက်ခြင်း အသစ်တစ်လုံးလဲပေးပါ ဒါမှမဟုတ် တခုတော့ အခွင့်အရေးပေးလိုက်မယ် (၀ယ်ထားတဲ့အတိုင်း ငွေပြန်အမ်းရင်လက်ခံပါတယ်လို့) လဲဆိုရော
ညနေစောင့်ပါတဲ့ ဒီလောက်တော့နားလည်ပေးလိုက်ပါတယ် * လက်တော့ ကို စီးတွေ၊ တံဆိပ်တွေကို ဓာတ်ပုံ ရိုက်ပြီးပြန်တာပေါ့……….. အိမ်ရောက်ပြီး ၁ နာရီဘဲကြာတယ် …….
ကျွန်တော်လည်း ဒီပြသနာကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ပထမတော့ ဈေးပေါတယ်ဆိုပြီးဝယ်သုံးမိတာကနေ နောက်ဆုံးတော့ ဒုက္ခမခံနိုင်တော့လို့ အခြား Brand အသစ်ပဲနိုင်ငံခြားကနေမှာသုံးတော့တယ်။ အဓိက ကတော့ ဆိုင်တွေကတာဝန်မယူတာရယ်၊ ဟိုဘက်ဒီဘက်ပုတ်ထုတ်နေတာရယ်နဲ့ကို အချိန်တော်တော်ကုန်သွားတယ်။ Acer ဟာ Brand ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုလူတွေကြားမှာတော့ ကြာကြာနေရင် နံမည်ပျက်နိုင်ပါတယ်။